बच्चालाई ज्वरो आउदा डेङ्गु पनि सोचौं
डा. दिनेश धरेल -
दु:खको कुरा यस्तो भयावह रुपमा फैलिरहेको डेङ्गु संक्रमण रोक्ने खोप आजसम्म पनि उपलब्ध छैन। केही देशहरूमा उपलब्ध हुन थाले पनि ती खोप परीक्षणका सबै चरण पार गरेर नेपाली बच्चाहरूको पहुँचमा आइपुग्न अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ।
घिमिरे युवराज -
मेरा लागि डा. गोविन्द केसी आम असहायका स्वर हुन्। करोडौं नेपालीको जीवन रक्षा निम्ति पटकपटक यति ठूलो कष्ट भोगिरहेका यी एक जना महापुरुषको जीवन रक्षा गर्न सकेनौं भने यस भूमिबाट परिवर्तनको आशा युगौंसम्म हराएर जानेछ। आम मानिसको न्यायका निम्ति अर्को महापुरुष जन्मन कयौं वर्ष लाग्नेछ। डाक्टर केसीको यो सत्कर्मको विगुललाई नसुनेझैं गरियो भने यो सत्तामा बसेका मानिस अत्यन्तै क्रूर र अत्याचारी ठहरिनेछन्।
घरकी बुहारी बोलाएर ससुरा र श्रीमानलाई गाली गर्न सिकाउने!
नारीवादको भाषण कण्ठ पारेर घरबाट निस्किएकी महिलाले भर्याङमुनि राखेको स्कुटर एक्लै निकाल्न सक्छे? उसले श्रीमान् वा भाइको साहारा नलिई हुँदैन। तीजको दर खाएर राति फर्किँदा लिन जाने कोही पुरुष नै हुन्छ। भान्सामा ग्यासको सिलिन्डर जोड्न सक्ने कति जना नारी होलान्? जति नै नारीवादको चर्को कुरा गरेर श्रीमानसँग पारपाचुके गरे पनि उसलाई गोप्य भए पनि ‘पुरुष साथी’ त चाहिन्छ नै।
सरकारले किन भंग गर्‍यो डा. केसीसँगको वार्ता?
हामीसँग डा. केसीको जीवनका कति दिन वा घन्टा बाँकी छन्, त्यो हामीलाई थाहा छैन। चिकित्सा विज्ञानले अझै मानव शरीरका अनेक रहस्य बुझिसकेको छैन र अहिले डा. केसीको जुन अवस्था छ, त्यसमा आउन सक्ने जटिलताका लागि कुनै आकस्मिक उपचार विधि अपनाउनु अगाडि नै ज्यान जाने जोखिम अत्यधिक छ। समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने कि मौकामा रमिते बनेर जीवनभर पछुताउने पुस्ताको हिस्सा बन्ने, हाम्रै छनोटको विषय हो।
अनसन भर्सेस टेन्सन खेल
दीपकराज गिरी -
युवाहरूले मात्र किन? सिंगो देशले उनीबाट केहि पृथक नतिजाको आश गरेको छ। जसरी आफ्नै दलकी नेतृलाइ स्वास्थ्य उपचारका लागि पचास लाख दिइँदा उनले फरक मत त राखे तर, निर्णय बदल्न सकेनन्। ठिक त्यस्तै गोविन्द केसीको अवसानपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’को कमेन्ट लेखेर केही फाइदा छैन। अत: बेलैमा यो सम्भावित क्षतिलाई रोक्न उनको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित छ।गगन थापा जुस पिलाउने र अनसन तोड्ने ‘नाटक’का एक पात्र मात्र नबनुन्। जुस पिलाउन आइपुग्ने भीडको एउटा अनुहार मात्र नबनुन्।
मेडिकल शिक्षा डा. केसीको मात्र सरोकार हो?
डा. पदम नेपाली -
कहिलेकाहीँ त गोविन्द केसी पागल नै हुन् जस्तो लाग्छ। निष्ठाको लागि, सुशासनका लागि अनि जनहित र जनस्वास्थ्यका लागि उनी पागल नै हुन्। नत्र यस्तो सत्याग्रह कसले गर्न सकेको छ र? जसरी एउटा पागलप्रेमीले आफ्नो प्रेम सफल बनाउनको लागि ज्यानको बाजी लाउँछ, त्यसैगरी उनले जनस्वास्थ्यको लागि पटक-पटक ज्यानको बाजी लगाएका छन्। मिडियाबाट यो सबै थाहा पाएपछि पनि नेपाली जनता कहाँ छन्?
माइक्रो बसमा एक-दुई रुपैयाँको महत्व
माइक्रो बसमा मैले भेटेकी यी आमा खासै पढेलेखेकी हैनन्। तर, उनले आफू ठगिनु हुन्न भन्नेमा धेरै सचेत रहिछिन्। तर, हामी धेरै पढेलेखेको भएर हो कि के हो एक-दुई रुपैयाँको बारेमा कहिल्यै ध्यान दिंदैनौं। नचाहिने ठाउँमा वाहियात कराउछौँ तर चाहिने ठाउँमा बोल्न हामीलाई लाज लाग्छ।
कर्मचारी भेट्न मन्त्रीको सोर्स लगाउँदा
खिलानाथ ढकाल -
यत्रो तीन-चार वर्षदेखि सुरुङ मार्गको चर्चा छ। सबै काम भौतिक योजनाबाटै हुने हो। तर, त्यहीँका कर्मचारीलाई थोरै पनि सूचना छैन।
महेश अाचार्य -
हिजोआज जता पनि महिला सशक्तिकरण र महिला अधिकारको मात्र कुरा हुन्छ। मिडियामा त्यस्तै, अड्डा अदालतमा त्यस्तै, राजनीतिक दलमा त्यस्तै, गैरसरकारी संस्थाको त झन् खेती नै यही। हामी महिला अधिकारको विपक्षमा पक्कै पनि छैनौं तर महिलालाई सशक्तिकरण गर्दैगर्दा कतै पुरुषलाई निसक्तिकरण त गरिरकेका छैनौं? महिलाको अधिकार खोजिरहँदा पुरुषको अधिकार हनन भैरहेको त छैन? समाजमा महिला र पुरुष दुबैको मानवअधिकारको सुनिश्चितता चाहिएको हो कि महिला अधिकारको मात्र सुनिश्चितता चाहिएको हो?
नेपाली फुटबलर सनसनी मच्चाउने, सरकार घोषणा मात्रै गर्ने
भूमिका पाख्रिन -
राष्ट्रिय टिमका हालका चर्चित खेलाडीहरू सरकारको उदासिनताप्रति आजित भइसकेका छन्। सरकारले तोकेको रकम समयमा नै उपलब्ध नभएसँगै उक्त रकम पाइने हो या हैन भन्ने कुरामै शंका रहेको राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूको तर्क छ। तथापि खेल जितेवापत सरकारले दिने भनिएको रकम चाँडै पाउने आशासहित खेलमै आफूहरूले अझै मिहेनत गरिरहेको खेलाडीहरू बताउँछन्।
यसकारण डा. सिंहसितै बर्खास्त हुनुपर्छ तीर्थ खनियाँ
डा. जीवन क्षत्री -
विश्वविद्यालय बर्बाद हुँदा डिग्री थन्क्याएर खाडीको तातो हावा खान जानेहरू कांग्रेस वा एमाले वा माओवादीका लागि कोही पनि हैनन्, ती जति बाहिरियो यहाँ शासन गर्न उति नै सहज हुन्छ। त्यस्तै आइओएम बर्बाद भएर देशभरका मेडिकल कलेजले खुरुखुरु नपढाई पैसामा डिग्री बेचे र त्रिवि शिक्षण अस्पताल डुबेर बिरामीहरू निजी अस्पतालतिर तस्करी गर्ने केन्द्रमा बदलियो भने तीर्थ खनियाँलाई केही फरक पर्दैन।
स्कुटरमा स्कर्टवाली खुट्टाखाली
रामप्रसाद गौतम -
प्रत्येकको मन दोधारमा छ । कति सम्म साधु बन्ने कुन हद पछि काशीको विरालोले जस्तो मुसा टिप्न थाल्ने । आफ्ना राम्राकुराहरुलाई सवैले देख्नेगरी नङ्याउनुपरेको छ बाँकि भ्रष्टाचार , दोधारे कुराहरु र कुकृतिहरुलाई लुकउनु परेको छ र यसैले गर्दामात्र अहिलेसम्म पेन्टी र अन्डरबियरको व्यापार चलेको छ ।
हामी कस्तो समाजका नागरिक ?
जगन्नाथ लामिछाने - ldquo;नागरिक समाज” हाम्रो लागि नयाँ शब्द होइन । यी शब्दहरु हाम्रो पुस्ताले २०४६ अनि २०६३ सालमा निकै नै सुनेका शब्दहरु हुन् । नागरिक समाजका अगुवाहरु भनेर हामीले धेरै नाम पढेका र सुन्दै आएका पनि छौ । नागरिक समाज राजनीतिक दल र संघ संगठनहरु जस्तो ...
डा.केसीको अनशनः ५ भ्रम र यथार्थ
कम से कम आइओएममा डिन वरिष्ठताजस्तो वस्तुगत आधारमा आउने र पार्टीलाई खुशी पार्ने बाध्यता नहुने हो भने त्यस तलका पदहरुमा हुने नियुक्ति निरपेक्ष रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नहुँदा पनि फरक पर्दैन भन्ने यसले देखाउँछ । दलीय भागवण्डा र वरिष्ठतामध्ये एक रोज्नुपर्ने हो भने चाहिं ती पदका लागि पनि वरिष्ठता नै रोज्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा मैले बुझेको डा केसीको मान्यता यही हो, र यसमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिंदैन । यसलाई लिएर उहाँले आफू अनुकुलका व्यक्तिका लागि वरिष्ठताको आधार समात्ने वा छाड्ने गरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन।
संघर्षशील दिदीको जूनयात्रा
अभि सुवेदी -
खुजी दिदी आफ्ना सक्रिय पचासी वर्षमा कतिपटक त्यो जूनले प्रताडित भइन्, थाहा पाउन सक्ने कुरै भएन। तर त्यो रातको त्यो उत्सव नाटककार दार्शनिक बालकृष्ण समले भनेजस्तो एउटा नियमित आकस्मितकता थियो। खुजी दिदीको सक्रिय जीवनको अन्त्य र त्यो रातको जूनेली जागरणको कहीं केही तारतम्य थियो कि त जस्तो लाग्यो।
मुक्तिनाथ जाँदा सिकेका कुरा
शरदचन्द्र पौडेल -
जबसम्म अन्यत्रबाट जोमसोमसम्म आउने बाटोको अवस्था खराब रहन्छ तबसम्म यातायात सहज हुन सक्दैन, मासिन वा वस्तु सजिलै जोमसोम पुग्नै सक्दैनन्। यो अवस्थामा त्यसै पनि खासै समस्या नभएको जोमसोम मुक्तिनाथ सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम भइरहनु औचित्यपूर्ण छैन। स्थानीयका अनुसार यो काम आवश्यकताभन्दा पनि स्थानीय व्यापारी र ठेकेदारलाई पोस्ने चाला मात्र हो। उनीहरुका अनुसार यो आवश्यकता र औचित्यताभन्दा अन्य आधारमा सरकारी साधन र स्रोत खर्च हुने गरेको एक अनुपम उदाहरण हो।
छोरामान्छे भइकन छाउपडी भोग्दा
अचेल हाम्रो घरमा छाउकटेरो छैन। कसैले भत्काइदिएर होइन, आफैंले नबनाएको हो। तर, बुबा धामी छँदै छन्। खुसी लाग्छ, अचेल मेरी भाउजू लालाबाला छाडेर मेरी आमाजसरी छाउकटेरामा सुत्न जाँदिनन्। अचेल मलाई अझ बढी खुसी लाग्छ, छाउ हुँदा आमा, भाउजु, दी, बहिनी घरमै बस्दा पनि नरिसाउने रैछ हाम्रो मस्टो देउता।
साधारण कोरियन आँखामा नेपाल
‘नेपाल भनेको हिमाल हो,’ उनीहरूको नेपाल बुझाइ यस्तो छ। नेपाल कहाँ पर्छ भनेर सोध्यो भने हिमालमा पर्छ भनिदिन्छन्। मानौं हिमाल कुनै देश हो र नेपाल त्यही देशभित्रको कुनै ठाउँ!
मलाई थुप्रै कोरियनले सोधेका छन्, ‘तिम्रो देशमा चामल पाइन्छ?’ उनीहरूलाई थाहा छ, ‘हिमालमा धान फल्ने हावापानी हुँदैन। मेरो देश हिमालमा पर्छ। म त्यही हिमालको मान्छे हुँ।’
यसकारण भिसी बन्न लायक छैनन् तीर्थ खनियाँ
जो आफैं चोरी गरेको सामाग्रीमा १५०० ताल न तुकका शब्द खर्चेर आफ्नो सामाग्री भनेर जर्नलमा पठाउँछ, उसले मेडिकल शिक्षा र यसको गुणस्तरले मानिसको स्वास्थ्यमा खेल्ने प्रत्यक्ष भूमिकाबारे कसरी बुझोस्? उसका लागि मेडिकल शिक्षा सौदाबाजी गरेर आफू वा आफूलाई नियुक्त गर्ने दललाई धनी बनाउने अवसरभन्दा बढी के हुन सक्छ? पार्टी कार्यकर्ताबाहेक आफ्नो अर्को कुनै हैसियत नभएपछि उसले आफूमुनिको नियुक्तिमा पार्टी कार्यकर्ताबाहेक अरुलाई कसरी योग्य देख्न सक्छ?
फोक्सो प्रत्यारोपणपछि ‘नेपथ्य नायिका’ लाई भेट्दा
किरणकृष्ण श्रेष्ठ -
कन्सर्ट बेला धेरै दर्शक जिज्ञासु बन्दै उनीसँग कुरा गर्न आएका थिए। उनलाई जीवितै देखेर सबै आश्चर्यचकित भए। ‘अमृत दाइले ‘यो जिन्दगानी’ गाउँदा पछाडि ह्विलचियरमै बसेर नाच्दै गरेका बिरामीको भिडियोले मलाई साह्रै छोयो,’ प्रशा तुलाधरले थपिन्, ‘म उनीहरूको ठाउँमा आफैंलाई देख्दै रोएकी थिएँ।’ कन्सर्टकै बीचमा त्यसरी रोइरहँदा आफूलाई फोक्सो दान गर्नेलाई सम्झँदै धन्यवाद दिएको पनि उनले सुनाइन्।
मोबाइल उठाउन छोडेको त्यो दिन
डा. कमल कोइराला -
‘तपाईंले शल्यक्रिया बिगार्दिनु भयो, पेसमेकर राख्नुपर्छ भनेको छ ..., आदि इत्यादि।’ चार दिनअघिसम्म हाम्रो प्रशंसा गर्ने अनुहार आज एकाएक अँध्यारो भयो। चिकित्सक भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने आवाज आज एकाएक किन यस्तो भयो?
थोराङ्ला पासमा थकाइ मार्दा
डा. गोपाल महर्जन -
मनाङ बजार पुग्दा सानो ठमेलको झझल्को दियो। गाउँमा थुप्रै विदेशी पर्यटक घुम्दै थिए। गाउँको दक्षिणतिर अन्नपूर्ण हिमालको विशाल शृंखला र शिरैमा गंगापूर्ण हिमाल तथा फेदमा रहेको गंगापूर्ण तालले मनाङलाई थप आकर्षण दिइरहेको थियो।
कुसुम देशमा कुनै मोडलको आवश्यकता छैन । सेतो छाला भएका प्रत्येक युवतिहरु मोडल हुन सक्छन् । देशमा कुनै फिल्ममा निर्देशकको इशारामा खेल्ने नायिकाको जरुरत छैन । देशलाई तिमी जस्तो कुनै सिनेमा भन्दा फरक वास्तविक नायिका चाहिएको छ । लाखौँ युवाहरुलाई निसङ्कोच आफ्नो काम र पारिवारिक जिम्म्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिको लागि हिड्न प्रेणित गर्ने नायिका चाहिएको छ । कामले मान्छेलाई कहिलै सानो बनाउँदैन, पिठ्यूमा बोकेको डोकोले अनुहारको सुन्दरता बिगार्दैन, निधारमा लगाएको नाम्लोले मान्छेको भाग्य थिच्दैन तिमी यही सन्देश संवाहक नायिका बन। तिमी वास्तविक जिवनमै नायिका छौ किन फिल्मकी हिरोइन बन्न्नु पर्यो? तिमी आफैँमा एउटा नमुना केटी हौ किन अरुले मोडल बनाउनुपर्यो ?
भारतको नयाँ नोटमा छापिने मंगल यान के हो?
डा. प्रज्वल काफ्ले -
पाँच सय र हजार दरका पुराना नोट खारेज गर्ने घोषणालगत्तै भारतले दुई हजार दरका नयाँ नोट चलनमा ल्याउने घोषणा पनि गर्यो। उक्त नोटमा एकातिर पुराना नोटमा जस्तै भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको तस्बिर छ भने अर्कातिर भारतीय मंगलयानको चित्र अंकित छ। नयाँ भारतीय रुपैयाँमा स्थान बनाएको यो मंगलयान के हो?
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) -
बस्ती निर्माण त सुरु गरियो तर अन्त्य गर्न निकै गाह्रो पर्यो। यही तनावमा एकदिन टेन्टमुनि सुस्ताएर बसेको थिएँ। कुञ्जनाले नजिक आएर भनिन्, ‘काम सुरु गर्यौं, अब फत्ते नगरी हुँदै हुन्न। तपाईंको तनाव दुर गर्ने एउटा उपाय मसँग छ।’ उनको भनाइले मनमा तरंग पैदा गर्यो। साँच्चिकै उनले भनेजस्तै हाम्रो अन्तिम उपाय त्यही थियो।
डाक्टर बेरोजगार भए, मेडिकल कलेज खोलौं!
जीवन क्षत्री - डाक्टर अनि बेरोजगार, केही वर्ष अघिसम्म यो कल्पना बाहिरको कुरा थियो। कुनै समय थियो लोक सेवा आयोगले सय जना डाक्टर माग्यो भने मुस्किलले पचास जनाको दर्खास्त पथ्र्यो। तर अब स्थिति बदलिइसकेको छ। पछिल्लो समयमा धेरै जनाले मसँग गुनासो गरेका छन्ः डा केसी...
मोहनशमशेरभन्दा पनि बढी त झुकेनौं हामी
टीकाराम पोखरेल -
सन् १९५० मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतसँग असमान सन्धी गरे। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर नेपालका नेताहरुले पटप पटक चर्का भाषण गरे। आन्दोलनमा होस् वा चुनावमा यो एजेण्डा जल्दोबल्दो बन्यो। तर तिनै हिजो भारतीय असमानताको एजेण्डा बोक्ने नेताहरु आज आएर सबैभन्दा बढी भारतसामु धनुषटंकार भएर झुके। के हिजो असमान सन्धि भयो भनेर डुक्रनेहरुले अहिले आपूm सरकारमा आएपछि समान व्यवहार खोज्नु पर्दैन? कि समानता भनेकै तपाईँले सत्ता प्राप्त गर्नु हो ? होइन भने ६७ वर्ष अगाडि मोहनशमशेर झुकेकोभन्दा पनि तल परेर किन झुकेको नेताजी ? यसले जनताका अगाडि अनुहार देखाउन असहज महसुस त हुँदैन?
ह्विलचेयरसहित डोकोमा अन्नपूर्ण यात्रा
आठ वर्षअघि सडक दुर्घटनामा परेर अपांगताको अवस्था बेहोर्नुपर्दा मैले सोचेको पनि थिइन, एक दिन म अन्नपूर्ण हिमालको फेदीसम्म पुग्छु भनेर। आज सम्झिरहेको छु, टिचिङ अस्पतालको बेडमा लडिरहँदा एक डाक्टरले आफ्ना साथीहरूलाई भनेका थिए, ‘हिज लाइफ इज युजलेस्, नथिङ क्यान डु, लाइक डेड बडी।’ बाँच्ने उत्प्रेरणा मलाई त्यसले पनि मिलेको हो। अपांगता अन्त्य होइन, यसभित्र पनि बाँच्ने, रमाउने, समाजमा केही गरेर देखाउने सम्भावना खोज्न सकिन्छ भनेरै मैले यो चुनौती मोलेँ।
मुखर्जीलाई स्वागत: नेताको कि नेपालीको
हिमाल दाहाल -
भारत हाम्रो छिमेकी हो, शत्रु होइन। तर उसको व्यवहारलाई हेरेर नेपालीहरु भारतलाई कत्ति मन पराउँदैनन्। झन् एक वर्षअघिको नाकाबन्दीको कारण त भारतले आफ्नो ऐतिहासिक छवि धुमिल बनायो। वृद्धदेखि बालकसम्म भारतलाई सराप्छन्। यसैबीच भारतीय राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले के त्यो छवी सुधार गर्ला ? आशा गर्ने ठाउँ त पटक्कै छैन।
कहाँ पुर्‍याउलान् नरेन्द्र श्रेष्ठले नेपाली फुटबल?
नवीन अर्याल -
उनको अगाडि तत्काल एउटा ठूलो चुनौती भनेको विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफालाई आफ्नो नेतृत्व गणेश थापामुक्त भएको आश्वस्त पार्नु नै हुनेछ। किनभने फिफाले कुनै व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि त्यसको एउटा पनि अंश फुटबलमा भएको हेर्न चाहँदैन। फिफा आफू आश्वस्त नहुँदासम्म उसले कुनै पनि फुटबल राष्ट्रलाई विकास बजेट उपलब्ध गराउँदैन। नेपालमा अहिले यो सबै रोकिएको अवस्था छ। फिफाले नेपाललाई चार वर्षमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ५४ करोड रुपैयाँ रोकेको अवस्था छ।